Iindaba-Umthunzi we-net coverage
Ngoku lixesha letekhnoloji ephezulu. Iimveliso ezininzi zisetyenziswa kwezolimo, kwaye iminatha ye-sunshade yenye yazo. Ukusetyenziswa kweinetha ze-sunshade kunika izibonelelo ezininzi kubasebenzisi, kwaye iingenelo ze-sunshade net zibandakanya ukuxhathisa ukubola. Ukumelana nemitha kunye nokukhaphukhaphu. Kwaye ukugubungela kwayo kubanzi. Makhe sijonge ukugubungela umnatha womthunzi.
Iminatha yomthunzi inoluhlu olubanzi lokusetyenziswa kwaye ingasetyenziselwa ukukhusela kunye nokulinywa kweentlobo ezahlukeneyo zokuloba kunye ne-aquaculture, imifuno, i-vertebrae, iintyatyambo, i-fungi edliwayo, izithole, izinto zonyango, i-ginseng, kunye ne-reishi. Isenokusetyenziswa nakwishishini leenkukhu. Yisebenzise. Ngelo xesha, iminatha ye-awning ingasetyenziselwa njengesixhobo semihla ngemihla, kodwa ayinakuze ibekwe ngokuthe ngqo eluphahleni. Ungafumana intsimbi yombane ethwele iipali ezininzi eluphahleni kwaye itsale umnatha okhusela ilanga ukuze ujikeleze umoya ongezantsi. Ukucinga ngophahla Isiphumo sokusebenzisa iminatha yomthunzi ibonakala ngokucacileyo.
Ndiya kuchaza uluhlu olusebenzayo lweminatha ye-shading, kwaye kukholelwa ukuba uluhlu olusebenzayo luya kwandiswa ngakumbi kwixesha elizayo. Ngokuqinisekileyo, iingxaki zinokuvela ngexesha lokusetyenziswa. Ukuba ufuna ukwenza njengenetha ye-shading yokucubungula, ngokuqhelekileyo kufuneka uyisebenzise ngendlela efanelekileyo kwaye uyigcine emva kokusetyenziswa. Ulondolozo yindlela esebenzayo kakhulu yokwandisa ubomi bemveliso yakho..